Hafsa Haji, Author at Ceelhuur Online
Home > Articles Posted by Hafsa Haji
Author: Hafsa Haji
July 18, 2018 Hafsa Haji636
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara kooxda Chelsea Eden Hazard ayaa lagu soo waramayaa inuu heshiis shaqsi ah la gaaray Real Madrid ka hor inta uusan udhaqaaqin garoonka Bernabeu. Madrid ayaa la fahamsan yahay inay Hazard ka dhigtay bartilmaameedkooda koowaad ee badali kara booska Cristiano Ronaldo xagaagan ka dib markii Kylian Mbappe ay meesha ka baxday suurtogalnimada […]
July 18, 2018 Hafsa Haji647
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay rajeyneyso inay Matteo Darmian u isticmaasho dalabka ay u dirayso xidiga Inter Milan ee Ivan Perisic. United ayaa si aad ah loola xiriirinayay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara sannadkii hore, tababare Jose Mourinho ayaana la fahamsan yahay inuu dib u soo nooleeyay xiisaha uu u qabo Perisic kadib qaab ciyaareedkiisa […]
July 18, 2018 Hafsa Haji657
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay wadahadal la gashay labada ciyaaryahan ee Chelsea Eden Hazard iyo Thibaut Courtois, iyagoo ku doonaya inay ku iibsadaan 150 milyan oo ginni. Madrid ayaa loo maleynayaa inay u aragto in Hazard uu bedeli karo Cristiano Ronaldo oo shan sanno ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or, ka dib markii meesha […]
July 12, 2018 Hafsa Haji1016
Barcelona ayaa xaqiijisay inay dhameystirtay saxiixa daafaca dhexe ee Seville Clement Lenglet heshiis shan sanno ah. 23 jirkaan ayaa Sevilla uga soo biiray Nancy xagaagii lasoo dhaafay, waxaana uu ku riyaaqay xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Spain isagoo dhaliyay afar gool 54 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan. Manchester United ayaa sidoo kale lala […]
July 9, 2018 Hafsa Haji755
Spain ayaa ku dhawaaqday in macalinkii hore ee Roma iyo Barcelona Luis Enrique uu noqon doono maamulahooda cusub labada sano ee soo socota. 48 jirkaan ayaa kala wareegay Fernando Hierro, kaasoo loo dhiibay Koobka Adduunka in uu maamulo La Roja ka dib markii la ceyriyay Julen Lopetegui. Spain ayaa xaqiijisay isbuucaan in Hierro uusan ku […]
Paulinho Oo Ku Laabtay Kooxdiisii Hore
July 8, 2018 July 8, 2018 Hafsa Haji657
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Paulinho ayaa dib ugu soo laabtay kooxda Guangzhou Evergrande heshiis hal xilli ciyaareed ah. 29 jirkaan ayaa kaliya u dhaqaaqay Camp Nou xagaagii lasoo dhaafay isagoo ka soo tagay kooxda Guangzhou, waxaana uu ku faraxsan yahay xilli ciyaareedkiisii ugu dambeeyey ee Spain, kaliya Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa inta […]
July 8, 2018 Hafsa Haji626
Ciyaaryahanka cusub ee Liverpool Fabinho ayaa shaaca ka qaaday inuusan marnaba ku dhaweyn inuu ku biiro Manchester United inkastoo horey loola xiriirinaayay inuu ku biiro kooxda. Fabinho ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu xagaagii lasoo dhaafay imaanaayo premier League ka dib markii kooxda Monaco uu si aad ah uga soo muuqday, laakiin wuxuu go’aansaday […]
April 17, 2018 Hafsa Haji839
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay ku darsatay liiska xiddigaha Manchester United ee Anthony Martial iyo xiddiga da ‘yarta Fulham Ryan Sessegnon. Kooxda La Liga ka dhisan ayaa diyaar u ah inay 60 milyan ginni ku dalbato xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska, kaasoo lagu tilmaamay bartilmaameed weyn, sida laga soo xigtay Daily Mail. Dhanka […]